महिना दिनदेखि थलामा गण्डकी मेडिकल कलेज - Nepal Bahas Nepal Bahas
महिना दिनदेखि थलामा गण्डकी मेडिकल कलेज
प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १३:१२
पोखरा । सामान्य अवस्थामा विरामीको उपचार गरी स्वस्थ बनाउने अस्पताल आफै थलामा परेको छ भन्दा जो कसैलाई पत्याउन कठिन हुने गर्दछ । तर पोखरामा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज विद्यार्थी आन्दोलनको कारण एक महिनादेखि आफै विरामी भएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आन्दोलनको कारण अस्पतालका सेवा तथा पठनपाठन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ ।
विरामी मर्कामा परेका छन भने कलेजमा कार्यरत झण्डै एक हजार प्राध्यापक र कर्मचारी एक महिनादेखि कामविहिन हुँदै आएका छन । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा अत्यावश्यक सेवा ऐनले बन्द गर्न निषेध गरेको अस्पतालजस्तो क्षेत्रमा विद्यार्थी स्वयमले हडताल गर्नु गम्भिर विषय हो । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मानव स्वास्थ्यका सन्दर्भमा अत्यन्त जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ ।
लामोसमय अस्पताल बन्द हुँदा पढ्न चाहने विद्यार्थी, विरामी, कर्मचारीहरु मात्र हैन अस्पताल वरिपरीको व्यवसायसमेत प्रभावित भएको छ । अस्पताललाई देखेर नजिकै महंगोमा सटर भाडामा लिएको भन्दै अस्पताल आन्दोलनका कारण बन्द हुँदा व्यवसाय नै चौपट भएको वताउँछन एक स्थानिय व्यवसायी । आन्दोलनका विभिन्न रुपहरु हुन्छन होला तर बन्दनै गर्दा अस्पतालमा आश्रित सवैमा असर पर्ने कुरालाई कसैले ख्याल नगरेको उनको गुनासो छ । अस्पताल बन्द हुँदा व्यापार सुन्य भयो तर घरभेटीको भाडा त शुन्य हुँदैन, उनले थपे ।
गण्डकी प्रदेशकै ठुलो अस्पताल आन्दोलनका कारण बन्द हुँदा सयौं विरामी मर्कामा परेका छन । कास्की, स्याङजा तनहुँ, पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, लमजुङ लगायत छिमेकी जिल्लाका विरामी उपचारको लागि अस्पताल आउने गर्दछन । विद्यार्थीले विभिन्न मागराखी आन्दोलन गर्नु विद्यार्थीको पक्षबाट आफैमा ठिक छ होला तर नेपालको कानूनले नै अत्यावस्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायको रुपमा परिभाषित गरेको अस्पताल बन्द गरी मागहरु पुरा गराउन खोज्नु कत्तिको न्यायिक हो ? भन्ने प्रश्न गर्दछन कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषकुमार खनाल । खनालले भने “ विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरी कलेजको पठनपाठन र अस्पतालको सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले एक छानविन समिति वनाई त्यसले आफनाे कार्य पुरा गरी प्रतिवेदन त्रि.वि.वि.को कार्यकारी परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसैगरी त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषदले गण्डकी मेडिकल कलेज लगायत त्रि.वि.वि.का अन्य मेडिकल कलेजको समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि ५ सदस्यीय टोली बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हाम्रो अन्तिम नियमनकारी निकाय त्रि.वि.वि भएकोले उसको निर्णय हामीले मान्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुरदेखिनै भन्दै आएका छौ ” । नियमनकारी निकायले स्वतन्त्र छानविन गरोस, छानविनवाट जे निष्कर्ष आउछ हामी मान्न तयार छौ भन्दापनि अस्पताललाई बन्दक वनाईनु आफैमा गम्भिर विषय भएको भन्दै खनालले कुनैपनि हालतमा आफ्नाे पक्षमा निर्णय हुनुपर्दछ भन्नुले प्रर्याप्त शंका उब्जाएको बताए ।
खनालले थप्छन् “स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरु संचालनमा प्रर्याप्त चुनौतीहरु रहेका छन् । कतिपयले यसलाई कमाउने साधन भनी आरोप लगाएपनि लगानीकर्ताको लगानीसमेत जोखिममा राखी कतिपय अवस्थामा घरखेत समेत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको मर्का बुझ्ने कस्ले ?” अनेकन त्यस्ता समस्यासँग सिघौरी खेल्दै ५५० शैया सञ्चालमा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजले दैनिक झण्डै एक हजार विरामीको उपचार गराउँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालवाट नेपाल सरकारले विषेश महत्व दिएको डायलासिस, सुरक्षित मातृशिशु, क्षयरोग निवारण, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, स्वास्थ्य बीमा, टाउको, मेरुदण्डसंग सम्वन्धित कार्यक्रम सञ्चालित हुँदै आएकोमा आन्दोलनबाट वन्द हुँदा गम्भिर प्रकृतिका विरामीहरु थप मर्कामा परेको अस्पतालको ठम्याई रहेको छ ।
लगातार ३ पटकसम्म आँउदा पनि सेवा लिन नपाएको पिडा व्यक्त गर्दछन पर्वतका दयाराम पोख्रेल । नियमित खानुपर्ने औषधीमा परिवर्तन गर्ने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार पटकपटक अस्पताल आउँदा दुःख भएको बताउछन उनी । कलेज र विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट दुवै ठिक होलान तर लामो समय अस्पताल बन्द हुनु विरामीको दृष्टिकोणबाट कुनैपनि हालतमा ठिक नभएको पोख्रेलको ठहर छ । यावत समस्याहरुको समाधान अस्पतालमा हड्ताल गरेर नहुने कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।
##gandaki medical college
#hospital in nepal